Dandruff (ဗောက်ထခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Dandruff (ဗောက်ထခြင်း)
Dandruff (ဗောက်ထခြင်း) ကဘာလဲ။
ဗောက်ဆိုတာ ကြာရှည် ဦးရေပြားပေါ်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဦးရေပြားဆဲလ်အသေလေးတွေ အချပ်လိုက်ဖြစ်နေခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ သည်ဗောက်ဖတ်တွေဟာ သင့်ပခုံးပေါ်တောင် ကျလာနိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ခြောက်သွေ့ယားယံခြင်းကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Dandruff (ဗောက်ထခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေထက် အမျိုးသားတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်
Dandruff (ဗောက်ထခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဗောက်ရောဂါ ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ မြင်လွယ်သိလွယ်ပါတယ်။ အဖြူရောင်ချောကျိကျိ အရေပြားဆဲလ်သေ အချပ်တွေဟာ သင့်ဆံပင်နဲ့ ပခုံးပေါ်မှာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပူလှုံခြင်းဟာအရေပြားကို ခြောက်သွေ့စေတဲ့အတွက် မိုးတွင်းနဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ နွေရာသီရောက်ရင် ပြန်ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cradle cap လို့ခေါ်တဲ့ အဆီဂလင်းလေးတေရောင်ပြီး ဖြစ်တဲ့ ဗောက်ရောဂါဟာ ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ အဖြစ်များသော်လည်း အသက်၁နှစ်အောက်ကလေး တွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သို့သော် အန္တရာယ်တော့မရှိနိုင်ပါဘူး။ သူ့အလိုအလျောက် ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
ဗောက်ရောဂါဟာ အရမ်းဆိုးရွားတဲ့ ပြသနာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် ပုံမှန်ဈေးမှာရောင်းချနေတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေနဲ့မှ အဆင်မပြေလျှင် (သို့) ဦးရေပြားများ နီလာ ရောင်လာလျှင် သင့်ဆရာဝန် (သို့) ဦးရေပြားကျွမ်းကျင် ပညာရှင် နှင့် ပြသသင့်ပါတယ်။ အဆီဂလင်းမှ အဆီထွက်များသောကြောင့် ဦးရေပြားရောင်ခြင်း (သို့) အခြားသောအခြေအနေတွေကလည်း ဗောက်ရောဂါနဲ့ ဆင်တူတတ်ပါတယ်။
Dandruff (ဗောက်ထခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
•အဆီဂလင်းမှ အဆီအထွက်များပြီး လှုံ့ဆော်ခံရသော အရေပြားတွေမှာ ရောင်ရမ်းတဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဗောက်ရောဂါဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပြီး အဖြူရောင်၊ အဝါရောင်ဗောက် အချပ်တွေနဲ့ ဦးရေပြားကို နီရဲစေပြီး အဆီတွေထွက်စေပါတယ်။
• ခေါင်းမလျှော်တာနဲ့ပဲ ဗောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ ခေါင်းပုံမှန်မလျှော်ဘူးဆိုလျှင် ဦးရေပြားမှ အဆီဆဲလ်နဲ့ အရေပြားဆဲလ်တွေဟာ ဗောက်တွေကို ဖြစ်စေမှာပါ။
• malassezia လို့ခေါ်တဲ့ မှိုတစ်မျိုးဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အများစုရဲ့ ဦးရေပြားမှာ ရှိတတ်ပါတယ်။ အချို့သူတွေမှာ ၎င်းဟာ ဦးရေပြားကို လှုံ့ဆော်ပြီး အရေပြားဆဲလ်တွေကို ကြီးထွားလာအောင်လုပ်ပါတယ်။
• ခြောက်သွေ့တဲ့ ဦးရေပြားမှာ ဗောက်ဖြစ်လာရင် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုသေးပြီး အဆီနည်းပါတယ်။ ဦးရေပြားနီမြန်း ရောင်ရမ်းခြင်းလည်း ဖြစ်တာ နည်းပါတယ်။
• ဆံပင်အလှပြင် ပစ္စည်းတွေဟာ ဦးရေပြားနဲ့ ဓါတ်မတည့်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်အလှပြင်ပစ္စည်း (သို့) ဆံပင်ဆိုးဆေးတွေမှာ ပါတဲ့ အချို့ပစ္စည်းတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဦးရေပြားနီမြန်း ယားယံပြီး ဗောက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Dandruff (ဗောက်ထခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဗောက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
• အသက်အရွယ်- ဗောက်ရောဂါဟာ သက်ကြီးကောင် ဝင်စ အရွယ်တွေမှာ စဖြစ်လေ့ရှိပြီး သက်လတ်ပိုင်းရောက်သည်ထိ ဆက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ လူကြီးတွေမှာ မဖြစ်ဖူးလို့တော့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အချိန်အကြာကြီး ကြာသည်ထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• ကျားဟော်မုန်း- အမျိုးသားတွေမှာ ဗောက်ရောဂါပို ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျားဟော်မုန်းကြောင့်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
• အဆီထွက်များသော ဆံပင်နှင့် ဦးရေပြား- Malassezia လို့ခေါ်တဲ့ မှိုတစ်မျိုးဟာ သင့်ဦးရေပြားမှ အဆီတွေကို မှီခိုစားသုံးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆီအထွက်များတဲ့ ဦးရေပြားနဲ့ ဆံပင်ဟာ ဗောက်ရောဂါဖြစ်ဖို့ ပိုလွယ်ပါတယ်။
• Parkinson’s diseaseကဲ့သို့ အာရုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ အဆီထွက်များပြီး ဦးရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ ဗောက်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ HIV ရောဂါပိုးရှိသူ (သို့) အခြားအခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ခုခံအားကျနေသူတွေမှာလည်း ဒီလိုမျိုးဗောက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Dandruff (ဗောက်ထခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်ဟာ သင့်ရဲ့ဆံပင်နဲ့ ဦးရေပြားကိုကြည့်ပြီး ဗောက်ရောဂါကို အလွယ်တကူ အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
Dandruff (ဗောက်ထခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ခေါင်းလျှော်ခြင်းဟာ ဗောက်ပျောက်စေဖို့ရာ အဓိက ကုသမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော ဆိုးရွားတဲ့ ဗောက်ရောဂါတွေကိုလည်း ဆရာဝန်ညွှန်ကြားပေးတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ steriod လိမ်းဆေးတွေ နဲ့ မှိုသတ်creamတွေ အသုံးပြုပြီး ကုသနိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 18, 2017
Dandruff. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dandruff/manage/ptc- 20215327. Accessed July 20, 2016.
Dandruff. http://kidshealth.org/en/teens/dandruff.html#. Accessed July 20, 2016.Dandruff. http://www.nhs.uk/Conditions/Dandruff/Pages/Introduction.aspx. Accessed July 20, 2016.